Ihe ngosi 2016 MacBook Pro ka akwadoghi ihe karịrị 16 GB nke Ram mgbe emelitere | Esi m mac
Nke a bụ otu n'ime nsogbu ndị ahụ ọtụtụ ndị ọrụ mere mkpesa ozugbo ha hụrụ ngosipụta nke ọhụrụ MacBook Pro na njedebe nke 2016. N'okwu a, a na-emegharị ọgba aghara nke enweghị nhọrọ nke 32 GB nke ebe nchekwa RAM. na mmelite a kacha ọhụrụ na anyị aghọtaghị ihe kpatara Apple anaghị agbakwunye nhọrọ ịhọrọ oke RAM a na kọmputa na taa nwere ike ijide 32 GB nke ebe nchekwa.
N'oge ahụ ma hụ izugbe "iwe" nke ndị ọrụ aka ọrụ, Phil Schiller n'onwe ya bịara na mbụ ịgbachitere mkpebi emere iji belata oke RAM ka ikike obodo wee nwee nnukwu na mgbakwunye usoro ohuru nke ndia gbochiri nwụnye ha. Mgbe ahụ ka ihe mere na ule ndị ndị ahịa Consumer mere na nnwere onwe nke Macs ọhụrụ a nke anyị niile maraworị ...
Mgbe oké mmiri ozuzo ahụ gasịrị, ọtụtụ ndị na-enyocha amụma buru amụma na site na ọgbọ na-esote kọmputa ọ ga-ekwe omume inwe nhazi na 32 GB nke RAM, mana n'oge a mgbe Intel Kaby Lake ọhụrụ ruru 2016 MacBook Pro na kọmputa ndị ọzọ nke Apple. , anyị ghọtara na nhọrọ a adịghị na nke ahụ naanị iMacs na Fusion Drive ga - eme ka onye ọrụ hazie 32GB RAM.
Mgbe anyị hụrụ nke a, anyị enweghị obi abụọ ọ bụla na nhazi ahụ nwere ike inwe mmejọ ọ bụla ka 32 GB nke RAM enweghị ike itinye, mana imewe nke ọhụrụ MacBook Pros nwere ike ịbụ isi ihe kpatara Apple anaghị ekwe ka ebe nchekwa a dị. N'aka nke ozo, ekwesiri ikwu na ya na 16 GB nke RAM o kariri iji ruo oru taa, ma o di nkpirikpi n'ime ogologo oge ma oburu na anyi choro idobe akụrụngwa na afọ ole na ole.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook Pro » 2016 MacBook Pros ka enweghị ike ịkwado karịa 16GB RAM mgbe emechara nkwalite
M ga-ubé dịkwuo ọkpụrụkpụ na tinyekwuo batrị na-ekwe omume nke na-amụba Ram na ọbụna 64 GB ma ọ bụrụ na ọ bụ Apple. Site n'ime nke a echeghị m na ihe ọ bụla ga - eme, dịka mmelite na nkọwapụta ga - egbochi atụmatụ "kachasị njọ".
Zaghachi Francisco Fernández
N'ihe banyere m, m ga-ebuli ọtụtụ igwe arụmọrụ iji bulie sava na macBook pro, na 16 Gb na ebule m dị mkpụmkpụ, enwere m olileanya na mgbe e mesịrị ha ga-ewepụta nhọrọ 32Gb, ma ọ bụghị na m ga-achọ nhọrọ ọzọ.
Apple File sistemụ mbụ na macOS High Sierra